N+ 300812 ကျွန်ုပ် သူကြီးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးဘယ်သူဖောက်သလဲ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » N+ 300812 ကျွန်ုပ် သူကြီးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးဘယ်သူဖောက်သလဲ?
N+ 300812 ကျွန်ုပ် သူကြီးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးဘယ်သူဖောက်သလဲ?
Posted by nature on Aug 30, 2012 in Creative Writing | 85 comments
Reply of nature အမေရိကန်ရဲ့ 9/11အရေးအခင်းကြီး၊ ထေရ၀ါဒ နဲ့မိုးပြာဝါဒ
ဒီပိုစ့်ကိုရေးရတာကတော့ အောက်ပါပိုစ့် မှ ကွန်မန့်ဖြေရှင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆြာအုပ် နှင့် ပေါ်ပြူလာမိုးပြာ (၁)
…မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့.. မြန်မာပြည်ကိုကမ္ဘာမှာဘာသာရေးခွဲခြားဖိနှိပ်မှု အရှိဆုံးတိုင်းပြည်စာရင်းက ထွက်ချင်ရင်.. အဲဒီဆရာတော်ကို.. ထောင်ကအရင်ဆုံးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး…
အားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင် အဲဒီစာရင်းကထွက်ထားတဲ့နိုင်ငံကိုပို့ပေးမယ် ။ ဘုရားရှိခိုးလို့အဖမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံတွေကရောနံပါတ်ဘယ်လောက်မှာပါနေသလဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ (တကယ်ဖြစ်သင့်တာကအဲဒီနိုင်ငံတွေကိုအရင်ဆုံးကန့်ကွက်သင့်တယ်။)
ကိုရင့်လေသံက.. မြန်မာပြည်ရေမြေသနင်းအစိုးရတဲ့.. မင်းတြားတော်မြတ်ကြီးလေသံပါလားကွယ်..။
မြန်မာပြည်မှာမွေးတဲ့.. မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်း… တဦးတယောက်ကို.. တဦးတယောက်က.. တခြားတနိုင်ငံပို့ပစ်မယ်ပြောရအောင် အခွင့်(Rights) မရှိပါဘူးကွယ်…
လူတယောက်ဟာ မကောင်းတဲ့နေရာနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာ ဘယ်နေရာမှာနေချင်မလဲ။
nature says: ———-
လူတယောက်ကိုထောင်ထဲမှာနေမလားထောင်အပြင်မှာနေမလားဆိုရင် ထောင်ထဲမှာမလွတ်လပ်လို့နေချင်တဲ့သူ ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ ဘာသာရေးလွတ်လပ်တဲ့နေရာ ကိုမသွားနိုင်ပဲ ဒီမလွတ်လပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ဘာဖြစ်လို့ပေကပ်နေသလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရပါ။
ဆြာအုပ်ရဲ့ ပိုစ်ကကွန်မန့်ပေးပြီးယခုရက်ပိုင်းအလုပ်ကိုစိတ်အားစိုက်လုပ်နေရတဲ့အတွက် အာရုံမရလို့ စာတွေသိပ်မရေးဖြစ်ပါ။
သူကြီးပြောတာကမြန်မာနိုင်ငံကဘာသာရေးခွဲခြားဖိနှိပ်မှုအရှိဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောပါတယ်။ ဒီသဘောက တခြားနိုင်ငံတွေကဘာသာရေးဖိနှိပ်ခွဲခြားမှု နဲတယ် လို့ဆိုရင် ဘုရားရှိခိုးလို့အဖမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံက ဘာသာရေးဖိနှိပ်ခွဲခြားမှု နဲသတဲ့လား။ အဲဒီနိုင်ငံကရော ဘာသာရေးခွဲခြားဖိနှိပ်မှုအဆင့်ဘယ်လောက်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကြီးမဖြေရသေးဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ဘာသာဝင်မဆို ဘုရားရှိခိုးလို့အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာ မကြားဖူးသေးပါဘူး။
ဘုရားရှိခိုးလို့အဖမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံထက် မြန်မာနိုင်ငံက ပိုဖိနှိပ်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ ဒီစာရင်းကိုယုံကြည်လို့ရပါ့မလား။
နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဟာလူ့အခွင့်အရေးအချိုးဖောက်ဖိနှိပ်ဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောတယ်။ဒီတော့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေများတယ်လို့သူကြီးကပြောတော့ ကျွန်တော်က ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေများရင် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုမရှိတဲ့ ကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့နိုင်ငံကို ပို့ပေးမယ်ပြောတော့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်တဲ့။
ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုအလုပ်အကိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ပညာသင်ဖို့ ဘယ်နိုင်ငံပိုကောင်းလဲဆိုရင် အမေရိကန်ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာသိသာပါတယ်။ ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကို ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်ကိုပို့ပေးရင် ကျေးဇူးတင်ခံရမလား လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တယ်လို့အပြောခံရမှာလား?
သူကြီးပြောသလိုကျွန်တော်ဟာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူဆိုရင် သူကြီးပြောတဲ့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေက ပိုမကောင်းပဲ ပိုဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုများတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်နေလို့ မြန်မာနိုင်ငံကပိုကောင်းနေလို့များလား။ ဒါဆိုရင်တော့သူကြီးညာပြောတာဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တော့်အပြစ်ကတော့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမဟုတ်ပဲ သူကြီးညာပြောတဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုယုံကြည်မိတဲ့အပြစ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။
အကယ်၍တခြားနိုင်ငံတွေကပိုကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်း ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကို သွားဖို့ပိတ်ပင်တဲ့သူကြီးသာလျှင်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူဖြစ်ပါတယ်။
(၁)့တခြားနိုင်ငံတွေကပိုကောင်းတယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကိုသွားဖို့ပိတ်ပင်တဲ့သူကြီး သည်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူဖြစ်ပါတယ်။
(၂) တခြာားနိုင်ငံတွေက ပိုမကောင်းဘူးဆိုရင်လဲ ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ သူကြီးညာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တခုကမြန်မာနိုင်ငံက ဖိနှိပ်မှုများတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံကမခွာချင်ဘူးဆိုရင်လဲအနစ်နာခံပြီး နေစရာ
ဘာများကြီးမားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အကြံအစည်များရှိလေသနည်း။
ကျွန်တော်တခုစဉ်းစာမိတာကတော့ အမေရိကန်ရဲ့ 9/11အရေးအခင်းကြီး၊ ထေရ၀ါဒ နဲ့မိုးပြာဝါဒသဘောတရားတွေကိုပါပဲ။ ဒီအရေးအခင်းမှာ World Trade Center ကိုတိုက်ဖို့ အမေရိကန်တွေပိုင်တဲ့ လေယာဉ်ပျံကိုပဲ ပဲ့ထိမ်းဒုံးသဖွယ်အသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားနည်းချက်ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်ရာမှာ အင်မတန် ဥာဏ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းကမ္ဘာ့အလယ်မှာ အားနည်းတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအားနည်းတဲ့နိုင်ငံမျိုးဟာအခြေကုတ်ယူဖို့အကောင်းဆုံးအနေအထားလို့ တွက်ဆသူများလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးအားနည်းချက်တခုက မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေများပြီး သံဃာတော်တွေက ဟောပြောစည်းရုံးရင်လွယ်လွယ်ရတတ်ပါတယ်။
ဒီတော့ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ World Trade Center ကြီးကိုတိုက်ဖို့အတွက်စာတတ်ပေတတ် ထေရ၀ါဒသံဃာထဲကနှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်ကြီးကိုများ US 1 million လောက်ပေးစည်းရုံပြီးပဲ့ထိမ်းဒုံးသဖွယ်အသုံးချလေသလားလို့တောင်တွေးမိပါတယ်။ စာပေတွေနှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်တော့ခက်ခဲပေမဲ့ စံနစ်တကျဘယ်နေရာကစဖျက်ရမယ်ဆိုတာတခြားလူတွေထက် ပိုသိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်း ငါရဲ့သာသနာကိုဖျက်မှာ ငါရဲ့သားတော်ရဟန်းသံဃာများထဲမှပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်မှာ ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော် နှင့်ကွက်တိပင်ဖြစ်ပါသည်။သာသနာတော်ကို ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက် အတွက်အဓိကအတားအဆီးဖြစ်နေတဲ့ သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့ကိုလည်း ဖျက်သိမ်းပစ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်သူဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပိုစ့်နဲ့တော့မဆိုင်ပေမဲ့တခုပြောချင်တာက ဒီနှစ်ဦးပိုင်းမှာအထက်က ကြွက်တွေ အများ ကြီးဆင်းလာတာကိုမှတ်မိကြဦးမှာပါ။ ဒါဟာဒီနှစ်ရေအရမ်းကြီးတဲ့အတိတ်နိမိတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေကြီ်းမှာကိုကြိုသိတဲ့ကြွက်တွေအသိုက်ပြောင်းခြင်းဟုထင်မြင်ပါကြောင်း ။
N+ 250911 ဗုဒ္ဓတရား ကြောင်းကျိုး နှင့် ကောသလအိမ်မက် မိုးပြာ
ဆြာအုပ် နှင့် ပေါ်ပြူလာမိုးပြာ(၃)
အမြင့်တက် အမှည့်ရနိုးနိုး … (မိုးပြာ/ထေရ၀ါဒ)
N+ 010112 ၂၀၁၂ ခုနှစ် နှုတ်ခွန်းဆက်
…..ဘုရားရှိခိုးလို့.. ဖမ်းခံရတယ်နာမယ်ထွက်တာ.. ဆော်ဒီလို့ထင်တယ်(မသေချာ)
အဲဒီနိုင်ငံနဲ့.. မြန်မာပြည်ကို.. တတန်းထဲထားပါကြောင်း…
မြန်မာတွေမှာ.. ဘာသာရေးအရဘယ်လောက်ဖိနှိပ်ခံရသလည်းဆိုရင်.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ခြင်းတူတူကို.. ၂၀၀၇က.. အစိုးရက..ဘုန်းကြီးတွေကိုရိုက်တယ်..။ထောင်ချတယ်..။
အတွေးအခေါ်မတူသူကို.. အာဏာစက်နဲ့ပေါင်းပြီး ထောင်ချတယ်..။ လူဝတ်အတင်းလဲခိုင်းတယ်..။
” ဘုရားရှိခိုးလို့.. ဖမ်းခံရတယ်နာမယ်ထွက်တာ.. ဆော်ဒီလို့ထင်တယ် ”
ကို Nature ရေ ၊
အဲဒီ သတင်းက အမှားကြီးလို့ ၊ အသိပေး ပါရစေကွယ် ၊
စစချင်း ထွက်လာတာက ၊
သီရိလင်္ကာသား တစ်ယောက် ဘုရားရုပ်ထု ကိုးကွယ်လို့ ၊
မိသွားပြီး အဖမ်းခံရတယ် ကြားတာပေါ့လေ ။
ဒါပေမယ့် ဆော်ဒီ အစိုးရ နှင့် သီရိလင်္ကာ အစိုးရ က ငြင်းပါတယ် ။
ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုး ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်း မရှိပါတဲ့ ။
သေချာ သိချင်ရင်တော့ အောက်က Link မှာ ဆက်ဖတ်ပါကွယ် ။
အခုလို ထောက်ပြတဲ့အတွက် စိတ်မဆိုးပါနှင့် ကို Nature ရေ ။
အရင် စပြောကတည်းက မှားနေမှန်း သိပေမယ့် မပြောမိခဲ့ဘူး ။
နောက် Post တစ်ပုဒ် တင်မယ်ဆိုမှသာ ၊
သတင်း အမှားကြီးကို အခြေခံပြီး ရေးမိမှာ စိုးလို့ပါ ။
မြန်မာပြည်ထဲမလဲ သတင်းမှားတွေနှင့်ပဲ တဝဲလည်လည် ဖြစ်နေရတယ်ကွယ် ။
၁ ။ လူ များစု ခမျာ မအားလို့ စာဖတ်အားနည်းကြတယ် ။
၂ ။ Connection က စုတ်ပြတ်နေလို့ ၊ အင်တာနက်ကို မမွှေနိုင်ဘူး ။
၃ ။ အင်တာနက်မှာ မွှေရအောင်ကလည်း ၊ အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းပြန်တယ် ။
အဘ ကိုယ်တိုင်လည်း ထူးခြားတာလေးတွေ တင်ပေးချင်သော်ငြားလည်း ၊
စာ များများရိုက်ဖို့အတွက် ၊ မျက်စိက မကောင်းလို့ပါကွယ် ။
အမှန်က ဆော်ဒီ ဥပဒေ အရ ၊
ဘာသာခြား အထိမ်းအမှတ်တွေ ယူသွင်းခွင့် မပြုပါဘူး ။
နောက်ပြီးတော့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံ တော်တော်များများမှာလည်း ၊
မွတ်ဆလင် ဘာသာကနေ ဘာသာပြောင်းရင် သေဒါဏ် ၊
မွတ်ဆလင် ဘာသာ အထိမ်းအမှတ်တွေကို စေါ်ကားရင် သေဒါဏ် ၊
စသဖြင့် အစွန်းရောက်တဲ့ ဥပဒေတွေ ရှိတာ အမှန်ပါ ။
ဒါပေမယ့် ၊ သူတို့ အစိုးရမင်းများ ခမျာလည်း ၊
အခုလို ၂၁ ရာစု လူ့အခွင့်အရေးခေတ်ကြီးမှာ ၊
သူတို့ ရဲ့ ၁၈ ရာစု ဘာသာရေး ဥပဒေများကို မသုံးရဲတာ တွေ့ရပါတယ် ။
နောက်ဆုံးမတော့ တနည်းနည်းနှင့် ပြန်လွှတ်လိုက်တာ များပါတယ် ။
…..ဘာသာရေးကိစ္စရေးလို့ လာရောက်တရားစီရင်သလိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ နဲနဲလေးများ အာဏာရှင်ဆန်နေသလားလို့ဗျာ…
ဥပမာ-ဗုဒ္ဓဘာသာက ၅ပါးသီလမှာသူတပါးပစ္စည်းကိုမခိုးရဘူးလို့ဆုံးမထားပါတယ်။ သူများပစ္စည်းကိုမခိုးရင် ဥပဒေကြောင်းအရလည်း ဘာပုဒ်မနဲ့မှအရေးယူလို့မရပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ဆုံးမတဲ့ဘာသာက နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းကို ခိုးလို့ရတယ်အပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့်ဆုံးမရင် သူခိုးတွေရဲရဲတင်းတင်းခိုးတာတွေဖြစ်လာရင် ခိုးဖို့မြှောက်ပေးတဲ့ဘာသာကတော့ ကြံရာပါအားပေးအားမြှောက်မှုမြောက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကြောင့်ရွာဆူရတယ်ဆိုရင်တော့တောင်းပန်ပါတယ်။ သူတို့ဖက်ကမဆူရင်ကျွန်တော့်ဘက်ကစဆူဖို့မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ရေးတာက သူတို့ရေးတာကို Reply & answer လုပ်ရုံပါပဲ။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားလာမယ်ဆိုရင်တော့ လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
…အဲဒီတော့ စာရေးတဲ့လူကလဲ မိမိကိုးကွယ်ရာဘာသာမဟုတ်သော အခြားဘာသာများကို ဝေဖန်ခြင်း၊ အပြစ်ပြောခြင်းကို ရှောင်သင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်…
ဒီစာကလေးက မိုးပြာကေ ထေရ၀ါဒကိုစတင်ဝေဖန်အပြစ်ပြောကတည်းက ရေးသင့်တယ်။ အခုမှရေးတယ်ဆိုတော့
အမှားကိုသိရင်အမှန်ကိုပြင်မှလူတော်လူကောင်းဖြစ်မှာပါ။ အမှားကိုသိလျှက်နဲ့မပြင်ပဲ ဆက်လက်ဆုတ်ကိုင်ထားရင်တော့ မိုက်မဲမှုတခုပါပဲ။ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက မင်္ဂလာသုတ်မှာ လူမိုက်ကိုပင်ရှောင်သွေလွဲလို့မမှီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေဆိုတဲ့လူမိုက်တွေကိုအခုမှတွေ့ရသလိုဖြစ်နေတယ်။
တခြားဘာသာမကောင်းကြောင်း မိုးမွှန်အောင်ပြောပြီး ကိုယ့်ဘာသာအတွက်လဲအကျိုးအောင် မစွမ်းဆောင်ဘူးဆိုရင်တော့ မိုးပြာဝါဒမကလို့ မိုးပြာဝါဒဘိုးအေးဖြစ်ဖြစ် မကယ်နိုင်တော့ပါဘူး ဗျာ…
အပေါ်မှာ ကွန်မန်းက ၈၀ လို့ပြထားပြီး ဒီမှာသုံးခုပဲတွေ့တယ်
ကော်မန့်တွေက.. များတော့စာမျက်နှာ၂ခုဖြစ်နေတာ… အပေါ်ကလင်ခ့်မှာ.. တခုလို့…။